Mpanamboatra sy mpamatsy Fiber-Felt Carbon activated China Beihai Fiberglass
Fiber-Felt carbon carbon activated
1.It dia vita amin'ny fibre voajanahary na fibre artifisialy tsy misy tenona amin'ny alàlan'ny charring sy activation.
2.Ny singa lehibe indrindra dia ny karbaona, manangona fantsona karbaona misy velaran-tany lehibe (900-2500m2 / g), taham-pizarana pore ≥ 90% ary aperture aza.
3. Raha ampitahaina amin'ny karbaona mavitrika granular, ny ACF dia manana fahaizana sy hafainganam-pandeha lehibe kokoa, mora miverina miaraka amin'ny lavenona kely, ary mahavita herinaratra tsara, manohitra ny hafanana, anti-asidra, anti-alkali ary mahay mamorona.
Ny fibre karbonika mavitrika dia vita amin'ny fibre voajanahary na fibre artifisialy tsy misy tenona amin'ny alàlan'ny fametahana sy fampidirana. Ny singa lehibe indrindra dia ny karbaona, amboarina amin'ny alàlan'ny chip karbonika miaraka amin'ny velaran-tany lehibe (900-2500m2 / g), ny tahan'ny fizarana ny pore ≥ 90% ary na ny aperture aza. Raha ampitahaina amin'ny karbaona mavitrika granular, ny ACF dia manana fahaizana sy hafainganam-pandeha lehibe kokoa, mamerina mora foana miaraka amin'ny lavenona kely kokoa, ary mahomby amin'ny herinaratra, manohitra ny hafanana, manohitra asidra, manohitra alkali ary mahay mamorona.
● fanoherana asidra sy alkaly
● Fampiasana azo havaozina
● Faritra ambonin'ny faritra 950-2550 m2 / g
● savaivony bitika bitika an'ny 5-100A Haingam-pandeha ny adsorption, im-10 ka hatramin'ny 100 heny noho ny an'ny karbaona vita amin'ny granular
Ny fibre karbaona mandeha dia ampiharina betsaka ao
1. Fanodinana solvent: afaka mandray sy mamerina ny benzena, ketone, esters ary lasantsy izy;
2. Fanadiovan-drivotra: afaka mandray sy manivana ny entona misy poizina, entona setroka (toy ny SO2 、 NO2, O3, NH3 sns), ny fatorana ary ny fofon'ny vatana amin'ny rivotra.
3. Fanadiovana rano: afaka manala ny ion-by mahery, karsinogen, fofona, fofona bobongolo, bacilli ao anaty rano ary mandra-pahafoana azy. Noho izany dia be mpampiasa amin'ny fitsaboana rano amin'ny rano mikitroka, indostria, fanafody ary fanafody.
4. Tetikasa fiarovana ny tontolo iainana: ny etona sy ny fitsaboana rano;
5. Saron-tava miaro amin'ny vava-orona, fitaovana fiarovana sy fanoherana ny simika, plug sivana setroka, fanadiovan-drivotra anaty trano;
6. Mitroka fitaovana radioaktifa, mpanondrana catalyst, fanadiovana vy sy fanodinana vy.
7. Fehim-panafody, fanefitra mahery vaika, voa voajanahary;
8. Fampitaovana elektrôtra, fitaovana fanamafisana, elektronika ary fampiharana loharano (herinaratra avo lenta, bateria sns.)
9. Fitaovana fanoherana ny lozam-pifamoivoizana, fanoherana ny hafanana avo lenta.
Faritra ambonimbony BET（m2 / g）
Taham-pahavoazana Benzene (wt%)
Mitroka iodine (mg / g)
Manga metilena (ml / g)
Volapoky aperture (ml / g)
Teo aloha: Fibre basalt
Manaraka: Lamba vita amin'ny fibre karbaona
Nahatsapa fibre carbon carbon activated